>မောင်ဆန်းစစ် -ူမန်မိာိုံင်ငံရေိးံငြ့် ယုတ္ဇိဗေဒ
ဇော်အောင် (မုံရွာ) - ဝန်ထမ်းများ အဂတိနည်းပါးခြင်းသည် နိုင်ငံတိုးတက်ခြင်းလား (သမ္မတလင်ကွန်းနှင့် သမ္မတဦးသိန်းစိန်)
ရဲရင့်သက်ဇွဲ ● အိပ်မက်တယ်
မြစ်ကို အလျားလိုက်ကူးခိုင်းထားခံရသော စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင် (Aung Htoo)
>FFSS Yangon - Pakauku Flood Charity Drive
>Blast hits USDA office
>Artist Htein Lin - Nargis 4
Junior Win ၏ My Life will go on (အင်္ဂလိပ်ဘာသာ၊ ရုပ်စုံ) စာအုပ် ထွက်ပါပြီ (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၃၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာပေက အင်္ဂလိပ်ဘာသာ (ဘာသာပြန်မဟုတ်) စာအုပ်အဖြစ် Junior Win’s The picture of Junior Win – My Life will go on ထုတ်ဝေလိုက်ပါပြီ။ စာရေးသူက သူ့ဘလော့ဂ်မှာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ My Life will go on အမည်နဲ့ အခန်းဆက်ရေးထားတဲ့ ဆောင်းပါးတိုများ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ဆောင်းပါးတွေကို ကာတွန်းမောင်ရစ်က သရုပ်ဖော်ဆွဲထားပြီး သူဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ ဘ၀ဇာတ်ကြောင်းက မိသားစုဓာတ်ပုံတွေကိုလည်း မျှဝေထားပါတယ်။...
ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း(သချာင်္) ၏ ဂိမ်းသီအိုရီ – ၂ ထွက်ပြီ (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၃၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာပေက ထုတ်ဝေပြီး ဆိပ်ကမ်းသာက ဖြန့်ချိတဲ့ ‘အခြေခံတွက်နည်းနဲ့ လက်တွေ့အသုံးချဆိုင်ရာ ဂိမ်းသီအိုရီ – ၂၊ အတွေးအမြင်ဆောင်းပါးများ ထွက်ပါပြီ။ ဖြန့်ချိရေး – ဆိပ်ကမ်းသာစာပေ – အမှတ် ၁၃ / ၃၈ လမ်း။ ပလာဇာဈေးသစ် ။ ၀၉ ၇၈၆၈၃၇ ၃၀၅ / ၀၉ ၉၆၃၆၉၉၈၃၄ ကို ဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပါတယ်။ စာအုပ်တန်ဖိုး ၃ ထောင် ကျပ် ဖြစ်ပါတယ်။ အမှာစာမှာ ဖော်ပြထားတာကတော့ – ဂိမ်းသီအိုရီ ဟူသော အမည်ကို စာဖတ်သူများအား မိတ်ဆက်ပေးသော...
ကာတွန်း မင်းထက်လူရဲ့ တရားစောင့်သူတွေ …
ကာတွန်း မင်းထက်လူရဲ့ တရားစောင့်သူတွေ … (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၂၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း မင်းထက်လူ Related posts ကာတွန်း မင်းထက်လူရဲ့လွတ်လပ်စွာဝေဖန်ကြပါ … (0) ကာတွန်း မင်းထက်လူရဲ့ လျှော်ကြမယ် ဖွပ်ကြမယ် (0) ကာတွန်း မင်းထက်လူရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေ … (0) ကာတွန်း မင်းထက်လူရဲ့ အကြီး အသေးပဲ ကွာတယ် … (0) ကာတွန်း မင်းထက်လူရဲ့ အဆင်ပြေတယ်မလား ဒါရိုက်တာကြီး (0)
မျိုးတေဇာမောင် ● စစ်ကြီးပြီးဆုံးတဲ့နေ့က
မျိုးတေဇာမောင် ● စစ်ကြီးပြီးဆုံးတဲ့နေ့က (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၂၊ ၂၀၁၈ မဟာမိတ်တပ်တွေ မြို့ထဲဝင်လာတော့ ပန်းရောင်စုံတွေ ဝရံတာကကြဲချကြိုလိုက်ကြတာ အပေါ်ကိုမော့ပြီး လက်တွေဝှေ့ရမ်းပြရင်း ပြုံးနေကြတဲ့ မဟာမိတ်စစ်သားတွေ။ ဓာတ်ဆီမရှိတော့လို့ ကားတွေရပ်ထားရတယ် ပေါင်မုန့်ညိုညိုတွေလည်း ရာရှင်စနစ်နဲ့ ဘာသာစကားတခုတည်းကို တံတိုင်းတခုနဲ့ ခြားလိုက်တယ် မြေပုံပေါ်မှာ မျဉ်းတကြောင်း ခဲတံနဲ့ခြစ်ပြီး ပိုင်းလိုက်တယ်။ စစ်ကြီးပြီးသွားပေမယ့် စစ်ကြီးကိုလွမ်းနေကြတယ်ဆိုရင် ဆန်းနေမလား။ မျိုးတေဇာမောင် Tags: မျိုးတေဇာမောင် Related posts အမြဲတမ်း သံသယတရားခံ (မျိုးတေဇာမောင် ဘာသာပြန်) (0) လက်ဆောင် (နိုင်ငံတကာကဗျာတချို့) (0) မျိုးတေဇာမောင် ● ရိုဆာ ဂျမာလီ (Rosa Jamali – Iran, 1977) (0) မျိုးတေဇာမောင် ●...
လှကျော်ဇော ● မြောက်ကိုရီးယားအရေး စစ်အေးခေတ်ကြီး ပြီးတော့မလား (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၂၊ ၂၀၁၈ ၁၉၇၂ ဖေဖော်ဝါရီ (၂၁) ပီကင်းနိုင်ငံတကာလေဆိပ်မှာ အမေရိကန်သမတ ရစ်ချတ်နစ်ဆင်နဲ့ တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ် ချိုအင်လိုင် တို့ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လိုက်တဲ့ သတင်းဓာတ်ပုံ ကမ္ဘာကိုပြန့်သွားတော့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးဇာတ်ခုံပေါ်မှာ အပြောင်းအလဲကြီး တွေ ချက်ချင်းပပေါ်လာတော့မလို ထင်ခဲ့ကြပါတယ်။ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာ ကမ္ဘာ့အင်အားချိန်ခွင်လွှာ အပြောင်းအလဲရဲ့ အစပြုချက်ကလေးပဲဖြစ်တာပါ။ နစ်ဆင်ရဲ့တရုတ်ပြည်ခရီးစဉ်ရဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဟာ နှစ်ရှည်လများကြာမှ ပေါ်ထွက်လာတာပါ။ ဥပမာ … ၁။ တရုတ် – အမေရိကန် သံတမန်ဆက်ဆံရေးကို ၁၉၇၉ ခုနှစ်မှ ထူထောင်နိုင်ပါတယ်။ ၂။ တရုတ်ပြည်ရဲ့အရင်းရှင်နိုင်ငံများနဲ့ စီးပွားရေးပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရေး (တံခါးဖွင့်ပေါ်လစီ) ကို ၁၉၇၈ ခုနှစ်မှ စတင် နိုင်ပါတယ်။...
ကာတွန်း ATH ရဲ့ မြန်မြန်ဖြုတ်ပါဟ ….
ကာတွန်း ATH ရဲ့ မြန်မြန်ဖြုတ်ပါဟ …. (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၂၊ ၂၀၁၈ No tags for this post. Related posts No related posts.
စန္ဒာမော် (Myanmar Now) ● အငြင်းပွားဖွယ်ကျောက်မီးသွေး စီမံကိန်းနှင့် ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရ
စန္ဒာမော် (Myanmar Now) ● အငြင်းပွားဖွယ်ကျောက်မီးသွေး စီမံကိန်းနှင့် ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရ (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၂၊ ၂၀၁၈ (ဘားအံ) — ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘားအံမြို့ ကျောက်မီးသွေးစွမ်းအင်သုံး ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ စီမံကိန်းနယ်မြေရှိ လယ်ကွင်းပြင်သည် ကြခတ်ဝါးရုံပင် ပေါများသော တောအုပ်လေးဖြင့် အနားသတ်ထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ ဒေသခံတို့ နိစ္စဓူဝ ဝမ်းစာရှာဖွေရေးအတွက် ယင်းတောအုပ်လေးမှ ထွက်ရှိသော တောဟင်းလျာများက အထောက် အကူပြုနေပြီး ယာတော စိုက်ခင်းတို့ကလည်း ဘဝ ရပ်တည်ရေးအတွက် အရေးပါလှသည်။ ပြည်နယ်အစိုးရက ဤနယ်မြေတွင် ဓာတ်အားပေးစက်ရုံတည်ဆောက်ရန် ဆန္ဒပြင်းပြနေပြီး အနားတွင် တသွင်သွင်စီးဆင်း နေသော သံလွင်မြစ်က ထိုစက်ရုံအတွက် ကျောက်မီးသွေး သယ်ဆောင်ပေးမည့် အဓိကလမ်းကြောင်း ဖြစ်လာပေမည်။ ကျောက်မီးသွေးသုံး ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ စီမံကိန်းနယ်မြေ တည်ရှိရာ...
ကာတွန်း KZZH ရဲ့ ကူညီသူတွေ ….
ကာတွန်း KZZH ရဲ့ ကူညီသူတွေ …. (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၂၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း - KZZH Related posts ကာတွန်း KZZH- အသံက မတိတ်နိုင်သေး (0) ကာတွန်း kzzh ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းသူတွေ … (0) ကာတွန်း kzzh ရဲ့ ပြောထားပြီးသားနော် … (0) ကာတွန်း kzzh ရဲ့ မေကြီးကယ်ပါ (0) ကာတွန်း kzzh ရဲ့ ပျောက်သောသူ (0)
သမ္မုခအ​ရေးအ​ကြောင်းများ ကျော်ကျော်- မြရည်စမ်း (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ (တစ်​) မိုးက တစိမ့်​စိမ့်​နှင့်​ ရွာ​နေဆဲပင်​ဖြစ်​သည်​။ ပတ်​ဝန်းကျင်​တခုလုံးစိုရွှဲ​နေကြသည်​။ သို့​သော်​ ​ချောက်ချားစဖွယ်​လည်း​ကောင်း​နေပြန်​သည်​။ ကျွန်​​တော်​​နေထိုင်​ရာအ​ဆောင်​မှ​နေ၍ ပတ်​ဝန်းကျင်တခုလုံးကို စီးစီးမိုးမိုးဖြင့်​ မြင်​​နေရသည်​။ အ​ဆောင်​​က ကုန်းအမြင့်​​ပေါ်တွင်​​ဆောက်​ထား၍ အနည်းငယ်​​တော့ စိတ်​​ဖြေသာသည်​။ ကုန်းမြင့်​​လေးသည်​ မူလ​မြေမှန်​ဟုတ်​မဟုတ်​ကို ကျွန်​​တော်​လည်းမသိ။ ကျွန်​​တော်​နှင့်​အတူ​ ရှိ​နေကြ​သော လူ​လေးဦးကလည်း သိမည့်​ပုံမ​ပေါ်ကြ။ သစ်​ပင်​ဝါးပင်​ကြီးများ၊ ပန်းမာလ်​များ၏အရိပ်​အ​ယောင်​ဟူသမျှ မမြင်​​တွေ့ရ။ ငှက်​​ကျေးသာရကာများ၏အသံဟူသမျှဝေးစွ၊ ချိုင့်​ဝှမ်းကြီး များနှင့်​ ​ရေပြင်​​ဖွေးေ​ဖွေးကိုသာ မြင်​​နေရသည်​။ မလှမ်းမကမ်းတွင်​ ကျွန်​​တော်​တို့အ​ဆောင်​​လေးကို ခုန်​အုပ်​မည့်​သဏ္ဌန်​ရှိ​သော​​ကျောက်​​တောင်​မြင့်​မြင့်​ကြီး ရှိ၍ ၄င်း၏အ​ခြေတွင်​ရှိ​သော ​မြေကြီး တာ​ဘောင်​များက တဖက်​တွင်​ရှိ​သော ​ရေထုကိုကာဆီးထားပါသည်​။ မိုးဆက်​တိုက်​ရွာသွန်းထားသဖြင့်​ ​ရေထုက အ​တော်​များ​နေပြီဖြစ်​၏။ ​ရေတစ်​ကုဗ​ပေ၏ ဖိသိပ်​အား မည်​မျှရှိသည်​ဆိုခြင်းကို ကျွန်​​တော်​မမှတ်​မိ​တော့ပါ။ သို့​သော်​လည်း...
ကာတွန်း ရွှေဗိုလ် – အဘ၏ နေရာ (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း ရွှေဗိုလ် Related posts ကာတွန်း ရွှေဗိုလ်ရဲ့ပေါက်ဖော်တို့ရဲ့ တောင်းဆိုသံ (0) ကာတွန်း ရွှေဗိုလ်ရဲ့ ကြိုပြင်ထားကြပါ … (0) ကာတွန်း ရွှေဗိုလ်ရဲ့ ပျောက်သောသူ ကြာရင်မေ့ (0) ကာတွန်း ရွှေဗိုလ်ရဲ့ လက်ညှိုးညွှန်ရာ ရေဖြစ်သူတွေ …. (0) ကာတွန်း ရွှေဗိုလ် ● နိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုတာ … (0)
လောအယ်စိုး ● ဆရာမ ဒေါ်ခင်ထားရွှေ – အပိုင်း (၃)
လောအယ်စိုး ● ဆရာမ ဒေါ်ခင်ထားရွှေ – အပိုင်း (၃) (မိုးမခ) ဇွန် ၃၀၊ ၂၀၁၈ (၁၉၆၂) ခုနှစ် မတ်လ (၂) ရက်နေ့မှ စတင်ကာ ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်း ဦးဆောင်သော စစ်တပ်သည် တိုင်းပြည်၏ အချူပ်အခြား အာဏာကို သိမ်းပိုက်၍ မြန်မာနည်း မြန်မာဟန် ဆိုရှယ်လစ်ခရီးစဉ်ကြီးကို စတင်ပါတော့သည်။ ပြောင်းလည်မှုကြီးအတော်မျာများကို တိုင်းသူလူထုတို့ ရင်ဆိုင်ရပါတော့သည်။ ထိုအပြောင်အလည်းများထဲတွင် ပညာရေးဆိုင်ရာ အပြောင်အလည်းများကိုလည်း ပြုလုပ်လေ့ရှိပါသည်။ မကြာခဏ ပြုလုပ်သော အပြောင်းအလည်များတွင် ပညာရေး၏ အခန်းကဏ္ဍလည်းပါဝင်ပါသည်။ ဒုတိယ အစမ်းစာမေးပွဲကြီးပြီးဆုံးပြီနောက် မကြာမှီကာလအတွင်း နောက်ဆုံးသော အစိုးရစစ်ဆေးသည့် စာမေးပွဲကို ကျွန်တော်တို့ ရင်ဆိုင်ကြရတော့ပေမည်။ ပြင်ဆင်ထားကြသော သူများကလည်း ပို၍ ပြည့်စုံအောင် စာကို အချိန်ပို...
ဇင်လင်း ● ပြည်သူတွေ ပွန်းပဲ့မှုအနည်းဆုံးဖြစ်စေမယ့် နိုင်ငံရေးမူဝါဒနဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံကို ပြင်ဆင်မယ်
ဇင်လင်း ● ပြည်သူတွေ ပွန်းပဲ့မှုအနည်းဆုံးဖြစ်စေမယ့် နိုင်ငံရေးမူဝါဒနဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံကို ပြင်ဆင်မယ် (မိုးမခ) ဇွန် ၃ဝ၊ ၂ဝ၁၈ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လ ၂၃ နဲ့ ၂၄ ရကနေ့တွေမှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ဒုတိယအကြိမ် နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ညီလာခံကြီးကို ရန်ကုန်မြို့ မြန်မာကွန်ဗန်းရှင်းစင်တာမှာ အောင်မြင်စွာ ကျင်းပပြီးစီးကြောင်း မီဒီယာသတင်းတွေအရ သိရတယ်။ ညီလာခံ ကာလအတွင်း အခြေ အနေတွေကို သတင်းမီဒီယာတွေက ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးကနေ ဖေါ်ပြခဲ့ကြတာတွေ့ရတယ်။ နိုင်ငံလုံး ဆိုင်ရာ ညီလာခံဖြစ်တဲ့ အလျောက် တိုင်းနဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်တွေအပါအဝင် ညီလာခံကိုယ်စားလှယ် ၁,ဝဝဝ ကျော် တက်ရောက် ခဲ့ကြောင်း သိရတယ်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ဒုတိယအကြိမ် နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ညီလာခံကနေ ဗဟို အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ လစ်လပ်နေရာတွေအတွက် တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းပြီး...
ကိုသစ် (သီတဂူ) ● မုန်တိုင်းထဲက ဖယောင်းတိုင်း – အပိုင်း (၁၄)
ကိုသစ် (သီတဂူ) ● မုန်တိုင်းထဲက ဖယောင်းတိုင်း – အပိုင်း (၁၄) (မိုးမခ) ဇွန် ၃၀၊ ၂၀၁၈ တိဗက်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ဘေဂျင်းသို့ရောက်သောအခါ အခြေအနေက မျှော်လင့် ထားတာထက်ပင် ပိုဆိုးနေပါသေးသည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ထိပါးစော်ကားခြင်းအပါအ၀င် ငဘိုဦးဆောင်သော တိဗက်ကိုယ်စားလှယ်များကို အချက်ပေါင်း ၁၇-ချက်ပါ စာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးဖို့ အမျိုးမျိုးဖိအားပေးပါလေတော့သည်။ တိဗက်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွေဟာ ဘယ်လို့မှရှောင် လွှဲမရသည့်အဆုံး သူတို့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကို ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်အာဏာကို လားမားဘုန်းတော်လေးက မပေးလိုက် ကြောင်း ချေပသောအခါ ဘေဂျင်းက အသင့်လုပ်ထားသော စာချုပ်ကော်ပီများကိုချပြပြီး လက်မှတ်ရေးထိုးဖို့ ဖိတွန်းလေ သည်။ နောက်ဆုံးတော့ ငဘိုဦးဆောင်သည့်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့က စာချုပ်ကို လက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်ရပါတော့သည်။ ၁၉၅၁ ခု မေလ ၂၃ ရက်နေ့။ အစတုန်းကတော့ တိဗက်ယဉ်ကျေးမှု၊ တိဗက်စာပေနှင့်...
လေပြေချမ်းချမ်း ● ဟစ်တလာရောဂါ (မိုးမခ) ဇွန် ၃၀၊ ၂၀၁၈ မုန်တိုင်းတွေကိုကြောက်တဲ့ ကိုယ်လိုကလေးတွေ ဘယ်လောက်များရှိမလဲ။ အပြောင်းအလဲကို လိုက်မပြောင်းလဲနိုင်သေးတဲ့နှလုံးသားနုနုများ။ အတွေ့အကြုံသစ်မှာနေဖျားပြီး ရောင်စုံလက်နေတဲ့ လူတွေရဲ့စိတ်ကို အံ့သြတကြီး မျက်လုံးပြာဝေခါးသီးနေဆဲပေါ့။ နွေ မိုး ဆောင်းသဘာဝ ဘာနဲ့မှနေသားမကျ အကြောက်တရားနဲ့တော့ နေသားတကျ။ ဟိုးရှေးနှစ်တော်တော်ကြာက အနွေးထွေးဆုံးရင်ခွင်ပျောက်ဆုံးမှုလား။ နောက်ကျောတဆုံးစိုက်ဝင်ဖူးတဲ့ ဓားဒဏ်ရာကြောင့်လား။ သူ့ယုံကြည်မှုဟာ သံသယကိုအရောင်ဆိုးခြင်း။ လူတွေကိုကြည့်တဲ့မျက်လုံးမှာ မာကျောစိမ်းတောက်နေတဲ့ ကလေးငယ်ကိုတွေ့ရင် မျက်လုံးလွှဲမပစ်ပါနဲ့ ။ တတ်နိုင်သမျှအလှိုက်လှဲဆုံး နွေးထွေးစစ်မှန်စွာ ပြုံးပြလိုက်စမ်းပါ။ ဒါ အနာဂတ်ကမ္ဘာကို ကယ်တင်ခြင်းပဲ။ သင့်ကြောင့် ကလေးငယ်တယောက် ဒါမှမဟုတ် သူငယ်ချင်းတယောက် သို့မဟုတ် လူတယောက် ဘယ်တော့မှ စိတ်ဒဏ်ရာမရပါစေနဲ့။ “စိတ်ဒဏ်ရာ” ဆိုတာ ဟစ်တလာ့လို ကမ္ဘာဖျက်ပိုး ဘယ်တော့မှမကျက်တဲ့အနာတမျိုး။ အမှောင်ရိပ်ထဲက...
ကာတွန်း ရာဇာသာစည်ရဲ့ ဘာကူညီပေးရဦးမလဲ … ပြော …
ကာတွန်း ရာဇာသာစည်ရဲ့ ဘာကူညီပေးရဦးမလဲ … ပြော … (မိုးမခ) ဇွန် ၃၀၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း ရာဇာသာစည် Related posts ကာတွန်း ရာဇာသာစည်ရဲ့ ပျော်လို့ဝရင် မော့ကြည့်ပါ … (0) ကာတွန်း ရာဇာသာစည်ရဲ့ အပျော်တမ်းအဖွဲ့ (0) ကာတွန်း ရာဇာသာစည်ရဲ့ မပြောင်းလဲသူ … (0) ကာတွန်း ရာဇာသာစည်ရဲ့ တရားလေးတော့ ထည့်ပါဦး (0) ကာတွန်း ရာဇာသာစည်ရဲ့ တစစ် စစ်နဲ့ (0)
မောင်မိုးသူ – စာပေ ဖြတ်သန်းမှု (၁) (ကုမုဒြာ အွန်လိုင်း၊ ရန်ကုန်) မိုးမခ၊ ဇွန် ၃၀၊ ၂၀၁၈ အသက် ၈၁ နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့မှာ မိတ်ဆွေများကို မောင်မိုးသူက သူ့ဘဝ ဖြတ် သန်းမှုလေးခုကို ဖော်ပြတဲ့ စာတမ်းလေး တစ်စောင် ဝေငှခဲ့ပါတယ်။ အဲသည် ဖြတ် သန်းမှုတွေကတော့ (၁) စာပေဖြတ်သန်းမှု၊ (၂) ရုပ်ရှင်ဖြတ်သန်းမှု၊ (၃) ပန်းချီဖြတ်သန်းမှု၊ (၄) နိုင်ငံရေးဖြတ်သန်းမှုလေးခုကို စာ တမ်းထဲမှာ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ အဲသည်ထဲ က စာပေဖြတ်သန်းမှုကို မော်ဒန်ဂျာနယ် မှာ ရေးသားဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ မောင်မိုးသူရဲ့ဘဝမှာ အရေးအကြီး ဆုံး စွဲစွဲမြဲမြဲ တစ်သက်လုံးလုပ်ဆောင်လာ ခဲ့တာ ကတော့ စာပေအလုပ်ပဲ ဖြစ်ပါ...
မောင်အောင်မွန် – ငါတို့ခေတ်ကဘောလုံးနဲ့ ငါတို့ခေတ်ကမီဒီယာ
မောင်အောင်မွန် – ငါတို့ခေတ်ကဘောလုံးနဲ့ ငါတို့ခေတ်ကမီဒီယာ ကျွန်တော်တွေးမိသလိုရေးပါမည် (၃၄၃) (မိုးမခ) ဇွန်၃၀၊ ၂၀၁၈ (၁) ကျနော်တို့ခေတ်ဆိုတာက ၁၉၅၃ ခု၊ တက္ကသိုလ်ရောက်လာချိန်၊ ဘောလုံးပွဲတွေ အဆင့်မြင့်ပေမယ့် သတင်းစာထဲ ကပ်စတန် ၃ ဂိုး၊ ကြည်းတပ် ၂ ဂိုး၊ ဒိုင် ဒစ်ကမန် လောက်သာပါလို့ အားကစားဝါသနာပါသူ ကလောင်ရှင်လေးများ ကြိုးစားရာကနေ သတင်းတို၊ နောက်တော့ ဆောင်းပါး၊ တဆင့်တက်ကာ သက်လုံ၊ တံခွန် စတဲ့ ဂျာနယ်တွေ ထွက်လာပြီ။ (၂) ၁၉၆၁ ခု၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၁-၁၆ ဒုတိယအကြိမ် ကျွန်ဆွဲပွဲ SEAP Games ကိုဖွင့်ပေးသူက၊ ဘောလုံးပွဲမကြည့်ရရင် သမတမလုပ်ဆိုလို့ ပါလီမန်ကက အာမခံတင်မြှောက်ထားတဲ့ မန်းဝင်းမောင်၊ အိမ်ရှင်မြန်မာ...
ကာတွန်း မောင်ရစ် – ရွှေမိနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ – we are in the same boat (Academic Weekly Journal, Yangon) မိုးမခ၊ ဇွန် ၃၀၊ ၂၀၁၈ No tags for this post. Related posts No related posts.
အမေရိကန်တက္ကသိုလ်များပညာရေးပြပွဲ ဆူးလေ ရှန်ဂရီလာမှာ ပြုလုပ်မယ် K (မိုးမခ) ဇွန် ၃၀၊ ၂၀၁၈ Connect University မှ ဦးစီးဆောင်ရွက်ကျင်းပတဲ့ အမေရိကန်တက္ကသိုလ်များပညာရေးပြပွဲကို ရန်ကုန်မြို့ Sule Shangri-La Hotel၊ရှိ Level 1၊ Bago Room တွင် ဇူလိုင် ၁ ရက်နေ့ နံနက် ၁ဝ:ဝဝ နာရီ မှ ၁၂နာရီထိကျင်းပ ပြုလုပ် သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ အဆိုပါ ပညာရေးပြပွဲမှာ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ နယူးယောက်ပြည်နယ်၊ မေရီလန်းပြည်နယ် အမေရိကန်အစိုးရ တက္ကသိုလ်များမှ ကျောင်းဝင်ခွင့် အရာရှိများ၊ Alumni ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများ လာရောက်ခင်းကျင်းပြသသွားမှာ ဖြစ်ပြီး အမေရိကန်ပညာရေးနှင့် မေဂျာရွေးချယ်မှု၊ ကုန်ကျစရိတ်၊ ဝင်ခွင့်ဖြေဆိုခြင်း၊ Scholarship၊ ကျောင်းသား အသင်း...
ကာတွန်း ညီထွေးရဲ့ တက်ကုန်ပြီ ….
ကာတွန်း ညီထွေးရဲ့ တက်ကုန်ပြီ …. (မိုးမခ) ဇွန် ၂၉၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း ညီထွေး Related posts ကာတွန်း ညီထွေးရဲ့ ပြေးမလွတ်တွေ … (0) ကာတွန်း ညီထွေးရဲ့ ဆင်ခြေများတဲ့ ကုန်ဈေးနှုန်း (0) ကာတွန်း ညီထွေးရဲ့ စီမံကိန်းတွေ … (0) ကာတွန်း ညီထွေးရဲ့ စိတ်ပြေလက်ပျောက် သွားလည်ပါကွယ် … (0) ကာတွန်း ညီထွေးရဲ့ ခွင့်ပြုချက် မကျသေးပါ (0)
ဝါကျဖြူ – ညနှုတ်​ခမ်းဖျား​ပေါ်က ကွဲအက်​​နေ​သောလူများ
ညနှုတ်​ခမ်းဖျား​ပေါ်က ကွဲအက်​​နေ​သောလူများ ဝါကျဖြူ (မိုးမခ) ဇွန် ၂၉၊ ၂၀၁၈ ​မှောင်​​နေတဲ့ မိုးသား​တွေထဲမှာ ငို​နေတဲ့ အ​ဆောက်​အဦး​တွေရှိတယ်​ ။ အိမ်​တိုင်းမီးလင်းဖို ဖိုပြီး ငူငူကြီးထိုင်​​နေတဲ့ မိန်းမ​တွေ တ​ယောက်​စီ ရှိတယ်​ ။ သန်း​ခေါင်​ယံမှာ လန့်​လန့်နိုးလာတတ်​တဲ့ တယ်​လီဖုန်းမြည်​သံ​တွေထဲမှာ မီးကျွမ်း​နေတဲ့ ဝိညာဉ်​​တွေ တဖျပ်​ဖျပ်​နဲ့ ဦး​ခေါင်းကို အဝတ်​စွတ်​ပြီး ပျံသန်း​နေကြ ။ အိမ်​မိုးသွပ်​ပြား​တွေ​ပေါ်က ​ခြေနင်းသံ​တွေကို ​ကြောင်​​တွေက တီဗွီနဲ့ သီတင်းစာ​ခေါင်းကြီးပိုင်းထဲထည့်​ပြီး ​လေထဲကို မြူ​တွေလိုလွှင့်​ချလိုက်​တာ ။ No tags for this post. Related posts No related posts.
ကာတွန်း မောင်ရစ် – သူတို့နဲ့ ဘာဆိုင်လို့လဲ (မိုးမခ) ဇွန် ၂၉ ၊ ၂၀၁၈ No tags for this post. Related posts No related posts.
ဂျူနီယာဝင်း ဗိုင်းရပ်စ်ဆိုတာ ဘာလဲ (မိုးမခ) ဇွန် ၂၉၊ ၂၀၁၈ ဗိုင်းရပ်စ် (virus) ဆိုသည်မှာ ကလာပ်စည်းတွေထဲမှာ နေထိုင်ကြသော သေးငယ်သည့် အစိတ်အပိုင်း အုပ်စုဖြစ်သည်။ သိပ္ပံပညာရှင်များသည်။ ထို သေးငယ်လွန်းလှသည့် ဗိုင်းရပ်စ်အုပ်စုများကို အလွန်ခွန်အားကြီး သည့် အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းများသုံးကာ လေ့လာကြရပါသည်။ ဗိုင်းရပ်စ်များသည် သက်ရှိသတ္တဝါများနှင့် အသက်မရှိသည့် အရာများကြားတွင် သူတို့ ထပ်မံ၍ မပွားနိုင်သည်အထိ နေထိုင်ကြသည့် ခန့်မှန်းရခတ်သော သက်ရှိအစ်ိတ်အပိုင်းအုပ်စုဖြစ်သည်။ ပုံတွင် ဗိုင်းရပ်စ်များက ကလပ်စည်း (cell) များကို မည်သို့ စားသောက် ဖျက်ဆီးသည်ကို ပြသထားပုံ။ လေ့လာကြည့်ပါက ဗိုင်းရပ်စ်သည် သူ့ဘာသာသူ အသက်မရှင်နိုင်ပါ။ သူတို့နေထိုင်သည့် အသက်ရှိ သည့် ကလပ်စည်းထဲမှာ ရာချီပြီး ထပ်မံပွားနိုင်ကြကာ နံဘေးက ကလပ်စည်းများဆီကိုပါ...
မြန်မာနိုင်ငံကာတွန်းဆရာများအသင်းမှစီစဉ်သော ကာတွန်းပညာမျှဝေခြင်းအစီအစဉ်(၂) ဇူလိုင် ၁ K (မိုးမခ) ဇွန် ၂၉၊ ၂၀၁၈ မြန်မာနိုင်ငံကာတွန်းဆရာများအသင်းမှစီစဉ်သော ကာတွန်းပညာမျှဝေခြင်းအစီအစဉ်(၂)ကို ရန်ကုန်မြို့ အမှတ်(၁၇၃/ ၁၇၅) ပန်းဆိုးတန်း တာဝါ-အခန်းအမှတ်(၆၀၁)ပန်းဆိုးတန်းလမ်း(အလယ်)ရှိ မြန်မာနိုင်ငံကာတွန်း ဆရာများအသင်း ရုံး ခန်းမှာ ဇူလိုင် ၁ရက်နေ့ နေ့လယ် ၁ နာရီမှ ၃နာရီထိ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမယ်လို့သ်ိရပါတယ်။ အဆိုပါ ကာတွန်းပညာမျှဝေခြင်းအစီအစဉ်(၂)မှာ ဟောပြောမျှဝေမယ့်ကာတွန်းဆရာက ကာတွန်းကျော်သူရှိန်ဖြစ်ပြီး ဟောပြောမယ့်အကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်ကတော့ ရေးသူအမြင်နဲ့ဖတ်သူအမြင် ဖြစ်ပါတယ်။ ကာတွန်းကျော်သူရှိန်ဟာ ဆရာဝန်တဦးလည်းဖြစ်ပြီး မဂ္ဂဇင်း၊ဂျာနယ်စတဲ့စာနယ်ဇင်းများမှာ ကာတွန်းများရေးဆွဲနေပြီး နိုင်ငံတကာကာတွန်းပြိုင်ပွဲများမှာ ကာတွန်းဆုများလည်း ရရှိထားပါတယ်။ ၎င်းရေးဆွဲတဲ့စာမဲ့ကာတွန်းများမှာ အထူးထင် ရှားပါတယ်။ ပထမအကြိမ် ကာတွန်းပညာမျှဝေခြင်းအစီအစဉ် ၁ မှာတော့ ကာတွန်းဦးငွေကြည်က စာနယ်ဇင်းကာတွန်းသမားဘဝ/ အတွေ့အကြုံများခေါင်းစဉ်နဲ့ ဇွန်လ ၁၆ရက်နေ့မှာ ဟောပြောပေးခဲ့ပါတယ်။...
ကျော်ထင် ● ဝါဆိုပန်းခူး၊ လွမ်းဖူးသူရင်​ (မိုးမခ) ဇွန် ၂၉၊ ၂၀၁၈ ”အ​မေဆိုဆဲ၊ဝါဆိုပွဲ၊ လှည်းက​လေးနဲ့သွားရ​အောင်​။ ကုက္ကိုပင်​ မြန်​မြန်​ခုတ်​လို့၊ လှည်း လုပ်​ပမောင်​။ လှည်းလုပ်​ရင်​ ကြာ​ပြန်​​ရော့မယ်​၊ မဘုတ်​ဆုံ တင်​ဆုံကြီး၊ လှည်း လုပ်​လို့စီး။ ” (၁) ဒီ​ကျေးလက်​ကဗျာ​လေးကို ကျ​နော်​တို့ ရွတ်​​တော့ လူပျိုမ​​ပေါက်​တ​ပေါက်​အရွယ်​ရောက်​​နေပြီ။ ကျ​နော်​တို့ သူငယ်​ချင်း​တွေအားလုံး အသံ​တွေလည်း ​ပြောင်းနေပြီ။သြသြ အက်အက်။ နို့အုံထိပ်​​​လေးတွေမှာလည်း ​ယောင်​​ယောင်​​လေး ​ဖောင်းလို့၊မို့လို့။ ထိမိရင်​ နာ​နေတတ်​တယ်​။ စိတ်​​တွေလည်း ဘာထူး​သေးလဲ။ နောက်ထပ်​​ဝေဒနာတခုကို ​တွေ့သိလိုက်​ရလို့ ​ဘောင်​ဘင်​​တွေခတ်​​​နေရတယ်​။ ဒီ​ဝေဒနာက ကျ​နော်​တို့အတွက်​ အသစ်လေ​။ တခါမှခံစား​တွေ့ကြုံဖူးခြင်း မရှိ​သေးတဲ့အသစ်​။ စိတ်​​တွေဆိုတာက အဲ့ဒီ့အသစ်​မှာပဲ တဝဲလယ်​လယ်​ရယ်​။ အဲ့ဒီလို တဝဲဝဲလယ်​​နေရတဲ့ဝေဒနာအသစ်​ကဘာလဲဆိုတော့ လိင်​ကွဲအ​ပေါ် စိတ်​ဝင်​စားတတ်​လာတာ။စူးစမ်းချင်​လာတာ။ ဒါ​ပေမဲ့...
လောအယ်စိုး ● ဆရာမ ဒေါ်ခင်ထားရွှေ – အပိုင်း (၂)
လောအယ်စိုး ● ဆရာမ ဒေါ်ခင်ထားရွှေ – အပိုင်း (၂) (မိုးမခ) ဇွန် ၂၈၊ ၂၀၁၈ ကျောင်း၌ သင်ကြားပို့ချရမည့် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများကို ဆရာမသည် ကျွန်တော်တို့၏ အတန်းနှင့် အခြားဝိဇ္ဇာဘာသာတွဲ စာသင်ခန်းခွဲများတို့တွင် ပုံမှန် ပျက်ကွက်မှု မရှိပဲ တာဝန်ကျေစွာဖြင့် သင်ကြားပို့ချပါသည်။ မှတ်မိသမျှ အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့၏ ပထဝီဝင်အနေအထား စီးပွားရေး လူမှုရေးနှင့်ဆိုင်သည့် အချက်များကို ထိုအချိန်က ကျွန်တော်တို့သင်ကြားခဲ့ရပါသည်။ အိမ်စာအဖြစ်ပေးသည့် ပထဝီဘာသာနှင့် ပတ်သက်သော ကျက်စရာများကိုလည်း ကျွန်တော် တာဝန်ကျေအောင် အထူးဂရုစိုက်၍ ကျက်မှတ်ပါတော့သည်။ အမှန်တကယ်ဝန်ခံရပါက မိမိတဦးတယောက် တာဝန်မကျေမှုကြောင့် ဆရာမအား စိတ်မဆင်းရဲစေလိုသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ အသားညိုညို ထောင်ထောင်မေားမောင်းနှင့် အမြဲပြုံးရွှင်နေတတ်သော ဝင်းအောင်သည် ကျွန်တော်တို့ အတန်၏ အတန်းခေါင်းဆောင်...
များများလည်း ထွက်ရမယ် ဈေးနှုန်းလည်း ချိုသာရမယ်။ ဒါမှ သူများနိုင်ငံကိုယှဉ်နိုင်မယ် (အင်တာဗျူး) အောင်ငြိမ်းချမ်း (Myanmar Now) (မိုးမခ) ဇွန် ၂၈၊ ၂၀၁၈ အရည်အသွေးကောင်းသော လက်ဖက်ခြောက် ထုတ်လုပ်နိုင်သည့် နည်းလမ်းများ သိရှိလာပြီဖြစ်ရာ လက်တွေ့လိုက် နာရန်သာ လိုအပ်သည်ဟု လက်ဖက်လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးက ပြောသည်။ —- လက်ဖက် အကြီးအကျယ်စိုက်ပျိုးသော ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ ပင်လောင်းမြို့တွင် လက်ဖက်ကို ပိုမိုနည်းစနစ်တကျ ထုတ်လုပ်နိုင်ရန် ဒေသခံတို့က ကြိုးစားနေကြသည်။ ပင်လောင်းလက်ဖက်အစုအဖွဲ့မှ အတွင်းရေးမှူး ကိုစိုင်းကောင်ခမ်းက နည်းပညာရရှိမှုနှင့် ဈေးကွက်အခြေအနေများအ ကြောင်း ပြောပြထားသည်။ မေး။ ။ နည်းပညာအသစ်တွေ ရရှိမှု အခြေအနေ ဘယ်လိုရှိလဲ။ ဖြေ။ ။ တိုးတက်လာတယ်။ အရင်ကဆိုရင် လက်ဖက်ကို ခူးမယ်၊ နယ်မယ်၊...
ကာတွန်း ရွှေဗိုလ်ရဲ့ လက်ညှိုးညွှန်ရာ ရေဖြစ်သူတွေ …. (မိုးမခ) ဇွန် ၂၈၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း ရွှေဗိုလ် Related posts ကာတွန်း ရွှေဗိုလ်ရဲ့ပေါက်ဖော်တို့ရဲ့ တောင်းဆိုသံ (0) ကာတွန်း ရွှေဗိုလ်ရဲ့ ကြိုပြင်ထားကြပါ … (0) ကာတွန်း ရွှေဗိုလ်ရဲ့ ပျောက်သောသူ ကြာရင်မေ့ (0) ကာတွန်း ရွှေဗိုလ် ● နိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုတာ … (0) ကာတွန်း ရွှေဗိုလ် ● ကြွားစရာ (0)
သာထက်အောင် ● ဇာတ်ခုံပေါ်က”ငိုချင်း” နဲ့ ဇာတ်ခုံအောက်က”ငိုခြင်း”
သာထက်အောင် ● ဇာတ်ခုံပေါ်က”ငိုချင်း” နဲ့ ဇာတ်ခုံအောက်က”ငိုခြင်း” (မိုးမခ) ဇွန် ၂၈၊ ၂ဝ၁၈ (ဓါတ်ပုံလေးတွေကြည့်ပြီး စိတ်ကအတိတ်မှာ တရစ်ဝဲဝဲ။ ကြာခဲ့ပြီပဲ ..၊ ကြာဆိုနှစ်ပေါင်း ၃ဝ နီးပါးရှိခဲ့ပြီ။ ရန်ကုန်မှာနေတဲ့ ကျွန်တော့်အကိုက ကြာခင်အိမ်ပြောင်းတော့မှာမို့ ပစ္စည်းတွေ သိမ်းရင်း ထုပ်ပိုးရင်း ကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဓါတ်ပုံလေးတွေ တွေ့လို့ viber နဲ့ လှမ်းပို့ပေးပါတယ်။ တပုံက NLD အဖွဲ့ဝင်ကဒ်ပြားပုံ၊ တပုံက ဒေါ်စု ၄၅ နှစ်မြောက်မွေးနေ့မှာ ကျွန်တော်တို့ မင်္ဂလာတောင်ညွှန့် (ဖို့မြေ) ရုံးကထုတ်တဲ့ပို့စကဒ်ပုံ၊ ဆရာတင်မိုးကဗျာလေးနဲ့၊ ပန်းချီကိုမျိုးမြင့်ဆီက အလှူခံလာတဲ့ ဒေါ်စု ခမောက် ဆောင်းထားတဲ့ပုံလေးနဲ့၊ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်မွေးနေ့ဆုတောင်းလေးနဲ့။ လွမ်းလို့ကောင်းနေတုန်း နောက်တပုံ တွေ့လိုက်တော့ အလွမ်းက ပိုသည်းလာပြန်ပါတယ်။ ဆရာမောင်သော်ကရယ်၊...
မောင်လူပေ – ဒေါ်လာကတော့ ပန်းပန်လျှက်
မောင်လူပေ – ဒေါ်လာကတော့ ပန်းပန်လျှက် (မိုးမခ) ဇွန် ၂၈၊ ၂၀၁၈ အခုတလော အွန်လိုင်းမှာတွေ့မိသမျှက မြန်မာပြည်မှာ ဒေါ်လာဈေးတွေတက်နေတဲ့အကြောင်းတွေချည်း ဖြစ်နေတယ်။ ၁၃၂၀နဲ့၁၃၅ဝကြားမှာ ရှိနေရာက ၁၃၈ဝဖြစ်သွားသတဲ့။ ဒေါ်လာကိုင်ထားသူတွေ ရွှေဖြစ်နေပြီပေါ့။ တချို့ကလည်း ဘာမှန်းမသိကြတော့ အစိုးရကိုအပြစ်တင်ကြတယ်။ သူတို့တွေ မေ့နေကြတာက မြန်မာပြည်မှာ ဒေါ်လာပေါက်ဈေးကို ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်နဲ့အညီအရှင်လုပ်ထားတယ် ဆိုတာပဲ။ ဒေါ်လာဈေးတက်တာ မြန်မာပြည်တစ်ခုထဲမဟုတ်။ ကမ္ဘာသုံးငွေကြေးတစ်ခုပီပီ အဝယ်လိုက်နေတဲ့အတွက် တကမ္ဘာလုံးမှာဈေးတက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်ဒေါ်လာဟာ လောလောဆယ်အခြေအနေအရ ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့နှင်းဆီခိုင်ဘဝရောက်နေလေတယ်။ အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်က ကုန်သွယ်ရေးမညီမျှမှုကို အကြောင်းပြပြီး ပြည်ပသွင်းကုန်တွေကို အထူးအခွန်ကောက်မယ်လို့ ကြေညာထားတော့ ကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေကလည်း တန်ပြန်တဲ့အနေနဲ့ အမေရိကန်ပို့ကုန်တွေကို အခွန်တိုးကောက်မယ်လို့တုန့်ပြန်တယ်။ ဒီလိုဖြစ်လာရင် ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲဖြစ်ပြီး အားလုံးအထိနာကြမှာပဲ။ အစစ အရာရာ ဈေးကြီးတော့မယ်သဘော။ ဖြစ်မလာသေးပေမဲ့ ရင်းနှီးမြှုတ်နှံသူတွေ ကြောက်နေကြပြီ။...
Page5of 909«1...34567...909»